बिचल्लीत अात्मा – साैगात मगर निरासी
– सौगात मगर निराशी
आफ्नो देश छोडेर परदेशीएको पनि एक वर्ष पुगेछ। ड्युटी ड्युटी भन्दाभन्दै समय बितेको पनि पत्तै भएन। बिदेशीने बेला घरखेत बन्धकी राखेर लिएको ऋण त जसोतसो तिरियो । अब पैसा जम्मा गरेर तराईमा जग्गा किन्छु । बुढाबुढी हुनुभएको बाबा अामाले पनि कतिन्जेल पहाडको उकालो ओरालो गरुन् । अनि मेरी सानुलाई पनि त सुख दिनु छ। बिहे गरेको एक महिना पनि नबित्दै छोडेर बिदेशीएँ। कसरी बसेकी होलिन् एक्लै बुढाबुढी भएका मेरा बाबा अामाको स्याहारसुसार गर्दै। कति धेरै सम्झना अाउछ होला मेरो । सम्झना त मलाई पनि अाउछ नि के गर्नु ? धेरै पैसा कमाएर साहुको ऋण तिरी परिवारलाई सुखी राख्ने सपना देखेको छु। सोचेको जस्तो भएन कमाइ न त भनेको काम पाइयो न तोकिएको तलब नै पाइयो। जे होस् परदेश नअाउनु थियो अाइहाल्यो अब जसरी पनि सपना पुरा गरेरै नेपाल फर्कन्छु। खाना खाएर राति अबेरसम्म मनमा यस्तै यस्तै कुराहरु खेलाइरहेको थिएँ । कतिबेला भुसुक्कै निदाएछु।
फाेटाे- साैगात मगर निरासी
मोबाइलमा बजेको अर्लरामको चर्को अावाजले म झस्किएर बिउझिएँ। ड्युटी जाने समय भैसकेछ। हतार हतार हात मुख धोएँ अनि बेलुकी खाएर बाकी रहेको बासी दालभात साथमा दुइवटा हरियो खुर्सानी टिफिनको भाडोमा हालेर ड्युटी गएँ।
बाह्र घन्टाको लागि फेरि सुरु भयो काम, नेपालबाट सजिलो काम छ भनेर पठाएका थिए मेनपावरले तर यहाँ गधाले जस्तो ठुलो ठुलो भारी बोक्नुपर्नेरहेछ। ठुला ठुला कन्टेनरहरु सामान लिएर अाउथे । सकि नसकी गह्रौं-गह्रौं सामान अनलोड गर्नुपर्ने, म सक्दिन भन्न नपाइने। नेपालमा हुने साथीहरूलाई बिदेश अाउनु हुन्न दुःख पाइन्छ भन्दा, रिसाउदै भन्थे। ” अाफुले टन्न पैसा कमायो होला अनी हामीले पैसा कमाउछ भनेर बिदेशीनु हुन्न भन्छ ”
बिदेशमा पैसा फल्ने रुख हुन्छ जस्तो गर्छन् साथीहरू । बिदेशमा मोजमस्ती गर्न पाइन्छ भन्ठान्छन् मान्छेहरू। तर सोचेभन्दा नितान्त फरक छ परदेशी जिन्दगी। घरपरिवारलाई अाँखाभरी सजाएर भनेको समयमा एकपटक फोन गर्न पनि पाइन्न पैसा नभएर। हुन त केही साथीहरू पनि छन् जो आफ्नो घरपरिवारलाई भुलेर मोजमस्ती गर्छन्। कमाएको पैसा यतै उडाउछन । तर म भोलिको सुखी जिन्दगी जिउने अभिलाषा बोकेर कयौं इच्छा चाहनाहरुलाई मारेर निरन्तर संघर्ष गर्न बाध्य थिएँ। परिवारका सारा जिम्मेवारी आफ्नो काधमा भएकोले गर्दा पनि, म एक्लै रमाउन सकिन। पैसा कमाउन नसके पनि जिन्दगीमा धेरै खुसीहरु कमाएर आफ्नो घरपरिवार सँगै रमाउने, अनगिन्ती मिठा मिठा सपनाहरू बुन्दै कष्टकर प्रहर सँग सम्झौता गरिरहेको थिएँ।
सदा झैं, दिनभरि बाँझो बारी जोतेर फर्किएको बूढो गोरु झैं लखतरान हुँदै बेलुकी कोठामा फर्किएँ। राइसकुकरमा खाना बसालिदिएँ अनि अालु र काउली काट्न थालें। करिब अाधा घन्टासम्ममा भात तरकारी पाक्यो। कोठामा सँगै बस्ने साथीहरू अझै आइपुगेनन्। एक्लै खाना खान मन लागेन । घरमा फोन गर्न मन लाग्यो । घरमा फोन नगरेको पनि धेरै भइसकेको थियो । सानुको नम्बरमा फोन लगाएँ। पहिलोपटक गर्दा त फोन उठेन। सायद खाना पकाउदै होलिन् मोबाइल बजेको थाहा पाइनन्। फेरि फोन लगाएँ सानुले फोन उठाइन् । ” हेल्लो सानु के गर्दै छौ ? खाना खायौ? सन्चै छौ ? अनि बाबा अामालाई कस्तो छ?” सानुले फोन उठाउने बित्तिकै मैले प्रश्नको भारी बोकाइदिएँ। सानुले पनि मिठो बोलीमा जवाफ दिई। ” म भर्खरै घाँस काटेर अाएकी। अब खाना बनाउछु। म सन्चै छु । बाबा अामा पनि अारामै हुनुहुन्छ। अनि हजुरलाई कस्तो छ?” “मलाई पनी ठिकै छु सानु, तिमीहरुको धेरै याद अाउछ ।” मैले अलि भावुक हुँदै भने। फेरि नरम हुँदै सानुले सम्झाउन थाली । ” मलाई पनि हजुरको याद धेरै अाउछ। बाबा अामाले पनी बिहान बेलुका हजुरको कुरा गरिरहनुहुन्छ। हजुर धेरै घरको चिन्ता नलिनु । घरमा सबै ठिकै छ। ऋण त सबै तिरिसक्नुभयो । अब त पहिले जस्तो साहुहरु पनि किचकिच गर्न अाउदैनन्। बरु अब नेपाल अाएपछी हजुर बिदेश नजानुस् । यहीँ दुःख सुख गरौंला नि है! ” सानुको कुरा सुनेर मेरो दिनभरिको थकान मेटिएको महसुस भयो । यति बुझकी श्रीमती पाउँदा अाफु धेरै भाग्यमानी छु जस्तो लाग्यो । खुसीले फुरुंग हुँदै भन्न थालें। ” हुन्छ सानु अब नेपाल फर्किए पछि तिमीहरूलाई छोडेर म बिदेशीन्न । बेलैमा खाना खानु बाबा अामा र आफ्नो ख्याल गर्नु। धेरै काम काम मात्र नभन्नु। बर्षामा एक्लै गैरीखेतमा नजानु खहरे खोलामा ठुलो बाढी अाउछ।” यति भन्नासाथ फोन काटियो। फोनमा पैसा सकिएछ। फेरि रिचार्ज कार्ड किन्न जान पैसा पनि थिएन । सानुलाई बाइ पनि भन्न पाइन। मन दुखाउदै बसिरहें।
साथीहरू पनि हल्लिखल्ली गर्दै अाइपुगे । पुर्वको एउटा मिल्ने राई दाइ हुनुहुन्थ्यो । घरमा कुरा गर्दागर्दै फोनमा पैसा सकिएको कुरा उहाँलाई सुनाएँ। राई दाइले पैसा निकाल्दै भन्नुभयो । ” इ लेउ पैसा रिचार्ज ल्याएर फेरि फोन गर घरमा ” पर्दैन दाइ सन्चो बिसन्चो के कस्तो छ थाहा भइहाल्यो । अब अलि पछि गर्छु दाइ अहिले यो पैसा राख्नुस् चाहियो भने मागौंला नी । मैले राइ दाइको पैसा फिर्ता दिदै भने। ” ल ल अनि भाइले के पकायौ अाज? यतिबेला भइसक्यो मैले त खाना पकाएकै छैन ।” राई दाइले दिक्क मान्दै सोध्नुभयो । मैले अालु र काउली पकाएको छु दाइ त्यही खाँउ न त ” हुन्छ ”
खाना खाइसकेर राई दाइ आफ्नो बेडमा सुत्न जानुभयो । म पनि आफ्नै बेडमा अाएर पल्टिएँ।
भोलि कसले देखेको छ र ? अाज जे भोगिरहेका छौं । त्यही नै रहेछ वास्तविक जिन्दगी । रुखका पातहरुलाई हेरेर अन्दाज लगाउन सक्छौं । यो पात यो मौसममा झर्छ भन्ने ! तर मान्छेको जिन्दगी बडो अचम्मको हुदोरहेछ। न त कसैले अन्दाज लगाउन सक्छ न कुनै मौसमले नै संकेत गर्छ। संघर्षको मैदानमा चलिरहने ढुकढुकि कतिबेला बन्द हुन्छ थाहै नहुदोरहेछ। सेकेन्ड सेकेन्डमा शरीरबाट भित्र बाहिर गर्ने स्वास कतिबेला रोकिन्छ थाहै नहुदोरहेछ।
बिहानै ड्युटी जान भनी सबै साथीहरू उठे। कोही मुख धुन थाले कोही कपडा लगाउन थाले। विगतका दिनहरूमा सबैभन्दा चाडैं बिउझने मान्छे म , त्यो दिन खै के भयो ? मेरो शरीर बेडमै लडिरहेको थियो । म अचम्मित भएँ । किन उठेन मेरो शरीर ?
ब्रस गरिसकेर राई दाइ मेरो शरीरको नजिकै अाउनु भयो। अनि घचघचाउदै उठाउने प्रयास गर्नुभयो। भाइ! ए भाइ ! उठ ड्युटी जाने बेला भयो कति सुतेको । ए भाइ ! उठन ढिला हुन लागिसक्यो । राई दाइले हातमा समाएर मेरो शरीरलाई उठाउने प्रयास गर्नुभयो । दाउरा झैं मेरो शरीर अरठ्ठ भएको थियो । मेरो कक्रिए, अरठ्ठ भएको शरीर देखेर राई दाइ एक्कासी अात्तिनु भयो । आँखा रातो रातो बनाउदै सबै साथीहरूलाई बोलाउनु भयो । के भयो ? के भयो ? भन्दै सबै साथीहरू मेरो शरीरको नजिकै अाउनु भयो । कसैले पानी ल्याएर मेरो अनुहारमा छर्कन थाले त कसैले मेरो नारी समातेर बिचार गर्न थाले। करिब १०/१५ मिनेट कोठामा सन्ननाटा छायो। त्यसपछि अघि मेरो नारी छाम्ने साथीले जुरुक्क उठेर बोल्यो । ” छैन मान्छे गइसकेछ।” उसको कुरा सुनेर कोठामा हल्ला मच्चियो । सबै साथीहरू चकित थिए । एकअर्कालाई सोध्दै थिए । यो सब कसरी भयो ? साथीहरू बिच प्रश्नै प्रश्नको खात लागेको थियो । तर जवाफ कतैबाट अाउन सकेको थिएन । मलाई अझै एकिन हुन सकेको थिएन कि यहाँ के भएको हो ? राई दाइको नजिकै गएर सोधेँ । ” दाइ के भएको हो ? मेरो शरीर बेडबाट किन उठेन? ” राई दाइले केही जवाफ दिनुभएन। मैले फेरि सोधेँ । ” दाइ के भएको भन्नुस् न ” फेरी पनि केही बोल्नु भएन। बरु लामो सास तान्दै उठेर हिड्न लाग्नुभयो। मैले उहाँको खुट्टा समाएँ तर उहाँलाई केही असर परेन । म अतालिएँ । चिच्याइ चिच्याइ सबै साथीहरूलाई सोधेँ । मलाई के भएको हो? मैले बोलेको किन सुन्दैनौ तिमीहरू ? तर कोही बोलेनन् ।
एकैछिनमा सुपरभाइजर अाइपुग्यो। मेरो शरीरलाई हेर्यो । अनि राई दाइलाई राखेर सबै साथीहरूलाई काममा जाउ भनी पठायो । सुपरभाइजरले फोन गरेर एम्बुलेन्स बोलायो । मेरो शरीरलाई एम्बुलेन्समा राखी हस्पिटल लिएर गयो । म मा एउटा अनौठो अाशा जाग्यो । हस्पिटलमा डाक्टरले उपचार गर्छन् । अनि मेरो शरीरले पहिलेको जस्तै हिड डुल गर्न सक्छ । हस्पिटलमा डाक्टरले मेरो शरीर चिरफार गर्न थाल्यो । सोचे डाक्टरले अप्रेसन गर्दैछ। अब सबै ठिक हुन्छ । एकछिन पछि कम्पनीको बोस पनि त्यहीँ अाइपुग्यो। साथमा एजेन्ड पनि अाएको थियो । उनीहरू कुरा गर्दै थिए । अब दुई दिन भित्रमा शवलाई नेपाल पठाइदिनुपर्छ। यस्तो कुरा सुन्ने बित्तिकै म छाँगाबाट खसेको जस्तो अनुभव भयो । रुँदै बोसको छेउमा गएँ अनि भन्न थालें। ” बिन्ती छ मलाई घर नपठाउनुस् । धेरै पैसा कमाउनु छ मैले, धेरै सुख दिनु छ मेरो बुढाबुढी हुनुभएको बाबा अामा र सानुलाई, डाक्टरले भर्खरै अप्रेसन गरेर गएको छ। अब केही दिनमा त ठिक भैहाल्छ नि त्यसपछि म काम गर्न सक्छु। ” मेरो कुरा बोसले पनि सुनेनन्। मेरो कुरा न त कोठामा साथीहरूले सुने न यहाँ बोसले । किन कसैले सुन्दैनन् मेरो कुरा। सोचे यो परदेशमा कसैले सुन्दैनन् मैले बोलेको । अब जान्छु नेपाल नै नेपालमा त मेरो घरपरिवारको सदस्यले मात्र होइन । पुरा गाउलेहरूले चिन्छन् मलाई ।
केही समय पछि मेरो शरीरलाई रातो बाकसमा हालियो। बाकस भित्र धेरै चिसो थियो । त्यहाँ भित्र न त ओढ्ने थियोे न ओछ्याउने। मैले लाखौं कोसिस गरें । लाखौं बिन्ती चढाएँ । तर मेरो केही लागेन । मेरो शरीरलाई बाकस भित्र बन्द गरि एउटा ठुलो अध्यारो कोठामा लगेर थुनिदिए।बोसले त दुई दिन भित्र नेपाल पठाउनुपर्छ भन्थे। तर एक महिना पुग्न लाग्यो अझै पठाएनन्। म त जसरी पनि जान सक्थें । तर चिसो बाकस भित्र बन्द भएको मेरो शरीर छोडेर जान मन लागेन। त्यहाँ मेरो मात्र होइन अरुका पनि धेरै शरीरहरु बाकसमा सड्न बाध्य थिए।
बिहानै कसैले ढोका खोलेको अावाज अायो। चार जना मान्छेहरु भित्र अाए अनि मेरो शरीर भएको बाकस उठाएर बाहिर निस्के। मेरो शरीर भएको बाकसलाई प्लेन भित्र राखिदिए । म पनि मेरो शरीर भएको बाकस सँग प्लेनमा चढें। फेरि सोच्न थालें । नेपालबाट अाउदा कति गार्‍हो भएको थियो । एअरपोर्टमा पुलिसले चेक गर्थे। बोर्डिङ पास चाहिन्थ्यो। फर्कदा त कति सजिलो केही नचाहिने । त्यति ठुलो प्लेनमा म एक्लै छु जस्तो लाग्यो । दायाँबायाँ हेरें सिट देखिन। के पिउने भनेर सोध्ने एअरहोस्टेज पनि थिएन । हुन त नेपालबाट अाउदा मेरो शरीर तन्दुरुस्त थियो । तर अहिले ढलेको छ त्यसैले पनि होला!
केही घन्टा पछि प्लेन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड भयो। जाँदा पनि प्लेन मै गएँ अनि फर्कदा पनि प्लेनमै फर्किएँ। तर फरक थियो जाँदा म अाफ्नै शरीर सँग उभिएको थिएँ। अहिले फर्कदा मेरो शरीर रातो बाकस भित्र कैद भएर अाएको छ। बिदेशबाट फर्केका अरु पनि धेरै मान्छे थिए । उनीहरूको हातमा सानो सुट्केस अनि साथमा ठुला ठुला लगेज थियो । तर म रित्तो थिएँ । केही थिएन म सँग,
करिब ३/४ घन्टा कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भन्दै मेरो शरीरलाई एअरपोर्ट भित्रै राखे । त्यसपछि बल्ल बाहिर निकाले । बाहिर बाबा अामा अनि मेरी सानु अाएको रहेछ। मैले त बोलाएको थिइनँ । फेरि उहाँहरूलाई कसरी थाहा भयो म अाउदै छु भन्ने , मैले केही सोच्नै सकिन । सरासर गएर बाबा अामाको पाउ छोएँ। अनि मेरी सानुलाइ अंगालो हालें। तर मेरो शरीर अझै बाकस भित्रै थियो । मेरो शरीर भएको बाकस नजिकै गएर अामा बेस्सरी रुन थाल्नुभयो। सानु त झनै बेहोस पो भइन् । अामाले रुँदै भन्नुभयो । ” मैले त भनेकै थिएँ । छोरा नजाउ परदेश, यहीँ परिश्रम गरेर सिस्नु खोले खाउला, तर तँ मानिनस् अहिले लास बनेर बाकसमा फर्किस् । अब हामीले कसको मुख हेरेर बाच्ने? यो उमेरमा तेरो लास देख्नु भन्दा पहिले म किन मरिनँ?” अामाको रुवाइले म छेतबिच्चेद भएँ। अामाको नजिकै गएर अामालाई सम्झाउने प्रयास गरें अनि भने । ” अामा म मरेको छैन । किन रुनु भएको अामा ? म मरेको छैन । ” अामाले पनि मेरो कुरा सुन्नु भएन। बाबाले बाकस उघारेर मेरो शरीर हेर्दै भन्नुभयो । ” थुक्क छोरा बाउलाई दागबत्ती दिने बेलामा अाफै मरेर अाइस् होइन “
जिन्दगीको गोरेटोमा हिड्दा हिड्दै चिप्लिएर कहिल्यै नउठ्ने गरि लडेछु म त , बुढा बुढी हुनुभएको बाबा अामाको अाँसु सम्म पुछ्न सकिन मैले, उहाँहरूको बाँच्ने अाधार भनेकै म नै थिएँ । अब कसरी जिउनु होला र, अनि मेरी सानु, सँगै जिउने सँगसँगै मर्ने कसम खाएर हरेक सुख दुःखमा साथै रहेर, हाँसे सँगै हाँस्ने रुँदा सँगसँगै रुने बाचा गरेर वरमाला पहिर्याएकी थिइन् मलाई । कति इच्छा चाहनाहरु थिए होलान् , कति सपना सजाएकी थिइन् होली, मेरा बाबा अामा अनि सानुको सपना पनि ढले मेरो लास सँगै। म त लाटो जस्तै भएँ । मेरो लासलाई एअरपोर्टबाट सिधै पशुपति आर्यघाटमा लगियो । अामाको रुने क्रम जारी थियो । सानु पनि होसमा अाएछिन् क्यारे, उठेर मेरो लासलाई अंगालो मार्दै चिच्याउन थाली, कराउन थाली, स्वर र सासले भ्याए सम्म रोइ, बुहारीको त्यो हालत देखेपछि अामाले झनै कसरी मन थाम्न सकोस् । आफ्नो गाँस काटेर खुवाएको छोरो, अाफुले थोत्रो कपडा लगाएर भए पनि नयाँ नयाँ लुगा किनेर लाउन दिएको छोरो, मेरो बुढेसकालको सहारा भन्दै गाउलेहरूको अगाडि सानले हिड्ने मेरी अामाको अगाडि छोरा लास बनेर ढलेको देख्दा कुन अामाको मन नरोलार, अामा पनि दौडिएर अाउनु भयो । मेरो लासलाई घचघचाउदै भन्नुभयो ।” उठ्न बाबु उठ् हेर त तेरो अामा अाएको छ। ए बाबु उठ्न कुरा गर्न । तर म मरिसकेको मान्छे कसरी उठ्न सक्थे र कसरी कुरा गर्न सक्थें।र अामा सँग । कति अभागी छोरा रहेछु म, मेरो बोली सुन्ने अामाको एउटा इच्छा पनि पुरा गर्न सकिन। बोल्ने मन नभएको त कहाँ होर तर मैले बोलेको कसैले सुन्ने भए पो, शरीर बिनाको अात्मा र अात्मा बिनाको शरीरको केही नलाग्दो रहेछ। शारीरिक रुपले लासलाई नै सबथोक ठान्दा रहेछन्। शरीर भित्र एउटा अात्मा हुन्छ जो कहिल्यै मर्दैन भन्ने कसैले बुझेनन् ।
रुँदा रुँदै सानु त फेरि बेहोस भइन् । अामा अझै मेरो शरीरको छातीमा शिर राखेर रुँदै हुनुहुन्थ्यो । पण्डितले मन्त्र पढ्दै भन्न थाल्यो । लासलाई यता लेउ। लासलाइ उता राख। लास माथि फुल अबिर छर्क। लासको छेउमा अगरबत्ती बालिदेउ। हुदाहुदा अब त मेरो परिचय पनि हरायो मेरो नाम थर सबै हराए। बाकी रह्यो त केवल एउटै नाम ” लास ”
साच्चै छोरा मान्छेको मन दह्रो हुन्छ भन्थे हो रहेछ। बाबाले मेरो लासमा दागबत्ती दिनेबेला एक थोपा अाँसु पनि खसाल्नु भएन । म बुझ्ने सक्थे मन त धेरै रोयो उहाँको पनि, तर देखावटी रुपमा भने नरोएरै टार्नु भयो । हेर्दाहेर्दै चितामा दनदनी अागो बलेन थाल्यो । म फेरि पनि कति छट्पटीएँ । कति रोएँ कति कराएँ । तर मेरो छट्पटी कसैले देखेन । मेरो रुवाई कसैले सुनेन। बिस्तारै मेरा शरीर जलेर खरानीमा परिणत भए । केही क्षण पश्चात् पानी छ्याप्दै बागमती सँग मिसाइदिए मेरो शरीरलाई, मेरो अस्तित्व मेटियो । बागमती नदिमा फोहोर मैला सँग मिसिएको मेरो शरीर म अाफैले चिन्न सकिन कुन मेरो शरीर हो अनि कुन फोहोर ??
परिवारलाई सुख दिने सपना देख्दादेख्दै कतिखेर म अाफै सपना भएछु थाहै पाउन सकिन । जिन्दगीमा परि अाउने दुःख र पीडा सँग लड्ने योद्धा, कतिबेला मृत अात्मामा परिणत भएछु थाहै भएन।
घर उही, अागन उही, पुरै गाउँ मस्त निन्द्रामा थियोे । अामाको आँखाबाट झर्ने अाँसु अझै रोकिएको थिएन। बाबा कुनामा झोक्राएर बसिरहनु भएको थियो । मेरी सानु सेतो कपडामा सजिएकी थिइन् । उनी एकोहोरो टोलाएर बसिरहेकी थिई। कहिले हात छाम्थी । कहिले सिउदोमा सुम्सुम्याउथी। मेरी सानुको सपना पनि सिउदोको सिन्दुर जस्तै भयो पुछियो।
उनका चाहना हातका चुरा जस्तै फुटेर टुक्राटुक्रा भए ।
मेरो घर सुनसान ओडार जस्तो भएको थियो । कसैले मुस्कुराएको हेर्न सम्म पाइएन । मानौैं मेरो परिवारले हाँस्न बिर्सिसकेका थिए । अामा बाबाको आँसु ,र सानुको त्यो हालत देखेर बस्नै मन लागेन । अब यो संसार पनि त मेरो रहेन।
सानुको नजिकै गए उनलाई धेरै बेर अंगालोमा बेरिरहें।
बाबा अामा भएको ठाउँमा गएर उहाँहरूको पाउ छोएँ।
अनि बिदा भएर लागें आफ्नो छुट्टै संसारमा……
म हिड्ने बेला मेरी सानुले फुलमाला लगाएर भित्तामा राखिएको मेरो फोटो हेर्दै अाँखाबाट अाँसुका थोपा तप तप खसाल्दै थिइन।
कथा- प्रबासी जिवन
मलाई यो परदेशी जिन्दगी देखी निकै अत्यार लाग्दै छ, सायद अब धेरै बर्षको अन्तराल